Wararka – Read Somali Newspaper!
Read Somali Newspaper! » Wararka
WARARKA MAANTA 29ka Nofeembar 2020
Su’aallaha Maanta: Yaa Madaxweyne ka noqon doona Soomaaliya 2021? Maxay shacabka Soomaaliyeed ku nacday siyaasadda fashilan ee Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo 99,5% “Been-Hawaas”? Ma sharci mise khiyaano qaran in Madaxweyne xilka ka dhannaaday soo xusho golaha cusub ee Shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan? Yaase doorasha xalal ah qaban kara? Ha wiqleyso!
Maamulka Puntland 29ka Nofeembar 2020 Maamulka Puntland ayaa ka dalbaday Bankiga Aduunka in uusan lacagaha mashaariicda u soo marin dowladda federaalka Soomaaliya, kadib kulan ay maanta yeesheen Wasaarada Maaliyada Puntland iyo Madaxda Bankiga Aduunka.
Kulanka oo ka qabsoomay magaalada Garoowe ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dul istaagi lahaa waxqabadyadii mashaariicda horumarinta hanaanka Maaliyadda iyo mashruuca dib u habeynta ee uu Bankiga Aduunka ka taageero maamulkaas.
Sidoo kale waxaa kulankaas lagu eegay guulihii laga gaaray qorsha hawleedka iyo dardar-galinta mashuurca PFM/DRM, gaar ahaan sanadkii ugu danbeeyey, tubtii loo maray iyo tallaabooyinkii la qaaday.
Wasiirka Maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa Madaxdii ka socotay Bankiga Aduunka uga mahad-celiyay kaalmada dhaqaale ee ay la garab taagan yihiin maamulkiisa, isagoona ka dalbaday in mashaariicda iyo lacagaha si toos ah loogu soo hagaajiyo Puntland.
Wasiir Xasan Shire ayaa sheegay inay fashilmeen mashaariicdii loo soo marshay maamulka Puntland dhanka dowladda federaalka Soomaaliya, sidaas darteedna ay muhiim tahay in hadda kadib si toos ah loogu soo shubo qasnada maamulkooda.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan lacagaha iyo mashaariicda ku socda maamulada loogu hagaajiya, si ay usii gaarsiiso halka loogu tala-galay, taasi oo sanadihii dambe ay saluug badan ka muujiyeen maamulada qaarkood.
Maamulka Puntland 29ka Nofeembar 2020 Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanaan ah laga dareemayo gudaha magaaladaasi, taas oo u dhexeyso madaxda dowlad goboleedka Puntland iyo ciidamada PSF-ta ee maamulkaasi.
Ilo wareedyo lagu kalsoon-yahay ayaa innoo sheegay in Puntland ay ciidamo horleh geysay magaalada Boosaaso, kuwaas oo xalay saq-dhexe gudaha u galay magaalada.
Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa ka yimid dhinaca Garoowe, waxaana ay ku biireen ciidamo kale oo horay ugu sugnaa magaalada Dekedda leh ee Boosaaso.
Arrintan ayaa qeyb ka ah gulufka ka dhanka ah ciidamada PSF-ta oo iyaguna ku sugan qeybo ka mid ah magaalada oo haatan laga dareemayo dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa cabsi xoogan ka muujinayo in dagaal uu ka qarxo halkaasi, maadaama ay kasii darayaan dhaq-dhaqaaqyo ciidan ee ka jira Boosaaso.
Hoggaamiyaha Puntland, Saciid Deni oo ka hadlayey xiisaddaan wuxuu ku hanjabay in uusan marnaba cid kala gorgortami doonin ilaalinta sharciga, isaga oo intaasi ku daray in ciidamadaas ay ka ciqaab weyn yihiin shacabka, haddiii ay jabiyaan sharciga ciidamada.
Muqdisho 29ka Nofeembar 2020 Mucaaradka Soomaaliya ayaa weli ku shirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxayna diidan yihiin sida ay ku socoto doorashada xubnaha golaha shacabka, mucaaradka ayaa horay u saluugsanaa doorashadii xubnaha Aqalka Sare ee dalka.
Maalintii seddexaad ayey mucaaradka ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho, waxay sheegeen inay la kulmi doonaan qeybaha bulshada, sidoo kalena waxay la kulmeen Ra’isul wasaare Maxamed Xuseen Rooble
Bishii April ee sanadkaan mucaaaradku waxay hoggaamiyeen gulufkii Badbaado Qaran, mashruucaas wuxuu lahaa laba u jeedo, mid waxay aheyd in Farmaajo laga hor istaago muddo kororsigii sharci darada ahaa, halka kan kale uu ahaa in awoodda doorashada laga wareejiyo Farmaajo, xilligaas mucaardka waxaa u suurta gashay in labadaas u jeedo ay ku guuleystaan.
Tadoba bilood kadib, gulufkii badbaado Qaran waxay mucaaradka mar kale ka fakarayaan inay xaalad cusub abuuraan, maadaama ay cabasho xooggan ka dhalatay sida loo maamulayo doorashada Golaha Shacabka.
Haddaba su’aasha inta badan ee reer Muqdisho qabaan waxay tahay maxaa sal u noqon doona gulufka cusub ee mucaaradka, maadaama midkii hore la ogaa hadafkiisa.
Doodaha kale ee miiska saaran waxaa kamid ah in mucaaradka isku raaci karaan Badbaado Qaran 2 iyo sida ay Shacabka u arki doonaan arrintaan.
Maamulka Puntland 29ka Nofeembar 2020 Boosaaso ee gobolka Bari waxay sheegayaan in saacadihii u dambeeyey ay soo gaareen qoysas qaxooti ah oo ka soo cararay colaada ka jirta dalka Yemen, kuwaas oo isagu jira Soomaali iyo Yemeniyiin.
Wasaaradda arrimaha gudaha, federaalka iyo dumuquraadiyaynta dowlad goboleedka Puntland ayaa dekedda magaalada Boosaaso ku soo dhoweysay qoysaskaas qaxootiga ah oo Yemeniyiin iyo Soomaali isugu jira, waxaana la soo bandhigay sawirradooda.
Maamulka Koonfur Galbeed29ka Nofeembar 2020 Guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay qabtay doorashada kursiga HOP103, oo uu ku fadhiyey Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Prof Maxamed Cusmaan Jawaari, xili uu muran badan ka taagna.
Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Axmed Badar ayaa sheegay in doorashada kursigaas u qabteen si aan loo dulmin xaqa siyaasiyiin kale, kadib marka uu ku dooday in Prof. Jawaari uusan la iman dood sharci ku dhisan.
“Haddii uu qof cabanayo oo uu leeyahay Kursi wax sharci oo taaban karo noo soo gudbiyay uu jirin, qof kale ayey sharci darro ku noqoneysa iyo dulmi. Majirto sababo aan ugu diidnay shahaado (Jawaari) waa qof qiimo badan oo ixtiraam u hayno,” ayuu yiri Guddoomiye Axmed Badar oo la hadlay idaacada BBC-da.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Prof. Jawaari ay ku ixtiraamayaan odaynimadiisa iyo meeqaamkiisa siyaasadeed, hase yeeshe aysan waxba ka jirin in ayaga iska horyimaadeen, sida uu hadalka u dhigay.
“Kuraastan siyaasad shaqo kuma laha, kuraastooda dadka aan soo horumarinay oo dhan waa jecel aan u qabno iyo qadarin. Haddii wax kale ay dhaceen anaga asaga farsamo iskagama hor imaan, ciddii ay iska hor-imaadeen ee uu ka tagay anaga kama jawaabi karn.”
Doorashada kursiga uu ku fadhiyay Prof. Jawaari ayaa waxaa ku soo baxay Maxamed Cali Xasan oo helay 78, halka musharax Mukhtaar Cali Ibraahim oo la tartamay uu isna helay 18 cod, sida uu shaaciyey guddiga doorashada ee maamulka K/ Galbeed.
Muqdisho 29ka Nofeembar 2020 Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka hadlay muranka hareeyey doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo uu ka socdo boob aan horey loo arag oo aan qarsaneyn.
Maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, oo labadooda madaxweyne goboleed laga maamulo Villa Somalia, ayaa qaaday tallaabooyin kuraasta loogu boobayo xubno ayaga ku dhow ama qaar uu wato madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Inkasta oo la boobay kuraas badan, haddana waxaa ugu weynaa kursiga HOP#67 oo Qoor Qoor uu u boobay taliye ku-meel gaarka ah ee NISA Yaasiin Farey, halka Lafta-gareen uu guddoomiyihii hore ee baarlamanka Maxamed Cusmaan Jawaari u diiday inuu tartamo, isaga oo kursigii uu ku fadhiyey ee HOP#103 u boobay wiil dhallinyaro ah.
Cumar Cabdirashiid ayaa qoraal uu soo dhigay twitter ku sheegay in “si looga fogaado baarlaman lagu muransan yahay, dalku kala qeybsamo, ama kasii daro xanuun kale oo Ethiopian ah: a) Joojiya doorashada lagu shubtay, b) Dib usoo celiya hanaan doorasho oo dhex-dhexaad ah maadaama heshiiskii August uu horseeday wax is-daba marin baahsan, c) Ku dara kormeerayaal si sare loogu qaado kalsoonida.”
Maraykanka 29ka Nofeembar 2020 Hooyo Soomaali ah oo ku nool dalka Mareykanka ayaa xabsiga loo taxaabay, kadib markii “ay gowrcday” wiil yar oo ay dhashay, kaas oo la sheegay in marka ay dishay ku ridday haanta lagu rido qashinka oo taalla gurigeeda.
Hooyada oo ay haatan su’aallo weydiinayaan ciidamada Booliska ayaa waxaa magaceeda lagu sheegay Fardowsa Cabdullaahi, waana 26 sano jir, sida laga soo xigtay Booliska.
Dhacdadan naxdinta leh ayaa ka dhacday magaaladda St, Cloud ee gobolka Minnesota, waxaana lagu soo warramayaa in gabadha ay qiratay dilka wiilkeeda oo sadex bil jir ahaa.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in haweeneydan Soomaaliyeed uu ilmaha yar ku inkiray ninkii dhalay kadibna ay ku dhaqaaqday falka ay sameysay oo aad looga argagaxay.
Fardowsa Cabdullahi ayaa haatan wajaheyso maxkamad, waxaana lagu soo oogay dil darajada labaad ah, iyada oo sidoo kale maydka wiilka yarna la geeyey xabsiga degmada Stearns oo ku yaalla magaaladda St. Cloud, si loogu sameeyo baaris dheeraad ah.
Falka ay ku dhaqaaqday gabadhan Soomaaliyeed ayaa ah mid aad u xanuun badan, waxaana dhacdadan si aad ah looga hadal hayaa baraha bulshada ee Internet-ka
WARARKA MAANTA 28ka Nofeembar 2020
Su’aallaha Maanta: Yaa la khaarajin rabaa weriyayaasha ka shaqeeya warbaahina dalka? Yaaa diiday in cadaaladda la hor keeeno dadkii dilay Kornayl Ikraam Tahaliil Ma Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” mise Rayal Wasaare “Dhooqo-Raam-Sade/Dhiiqo-Raam-Sade”? Yaa Madaxweyne ka noqon doona Soomaaliya 2021? Maxay shacabka Soomaaliyeed ku nacday siyaasadda fashilan ee Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo 99,5% “Been+Hawaas”? Ha wiqleyso!
Puntland 28ka Nofeembar 2020 Ciidanka PSF ee Puntland iyo hoggaamiyaha maamulkaas Saciid Deni ayaa weli qoorta isugu jira kadib xil ka qaadistii uu ku sameeyey Taliyaha ciidamadaas.
Sacidi Deni oo uu damac kaga jiro 16-ka kursi ee taalo Boosaaso ayaa u dhaqaaqay isbadal uu la damcay hey’adaan ayaa illaa iyo hadda shaqeyn la’a.
Ciidankaan ayaa dhawaan gudaha u galay Magaalada Boosaaso, waana ciidamo ka badan 3 Kun oo Askari, waxaana loo diyaariyey inay ka hor tagaan halista culus, gaar ahaan duulaanka Kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab.
Xaaladda Magaalada Boosaaso ma fadhiso, ciidan badan ayuuna Saciid Deni dhankiisa geeyey. Shalay waxaa halkaas tagay Wasiirka Amniga ee Puntland Cabdisamad Gallan iyo taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland.
Shir jaraa’id oo ay saxaafadda u qabteyn ayaa u badnaa eedeyn ku wajahan hoggaanka ciidanka PSF, waxay u muuqdeyn niman raba inay qariyaan damaca Deni ee 16-ka kursi ee taalo Magaalada Boosaaso haddana qarin la’ duulaanka ay u socdaan.
Saraakiil ka tirsan PSF oo shirka wasiir Gallan kadib iyaguna shir ku qabtay Magaalada Boosaaso ayaa iska fogeeyey dhammaan eedaha loo soo jeediyey.
Ethiopia 28ka Nofeembar 2020 Ra’isul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo wareysi siinayay warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa wacad ku maray “in uu aasi doono” sida uu hadalka u dhigay cadowga Ethiopia.
Fariintiisii ugu horeysay tan iyo markii maalmo ka hor uu ku biiray jiidda dagaalka ayuu Mr. Abiy ku yiri, “Ilaa aan cadowga ka aasno, oo madax banaanida Ethiopia aan ka xaqiijinno, dib u laaban meyno.”
“Cadowgu malaha awood iyo adkeysi ay nagula dagaallamaan. waanna ka guuleysaneynaa,” ayuu yiri Abiy.
Muqdisho 28ka Nofeembar 2020 Sawirro lagu qaaday satellite-ka oo ay heshay Al-Jazeera ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay taageero militari oo baaxad leh siineyso dowladda Ethiopia ee dagaalka kula jirta mucaaradka Tigray-ga.
Muqdisho 28ka Nofeembar 2020 Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in aysan aqbali doonin boobka ku socda doorashooyinka dalka, iyagoo doorashada deegaanada qaar ku qeexay isku ‘awood sheegasho aan loo marin’ habraacyadii loo dejiyey doorashada.
Golaha ayaa qoraalkaan ku xaqiijiyey inay jiraan kulamo u socda, si ay go’aan uga gaaraan waxyaabaha socda, sidoo kale waxay shaaciyeen kulamo ay la yeelan doonaan R/wasaare Rooble, bulshada rayidka iyo beesha caalamka.
“Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu maalamahan leeyahay kulamo dhexdiisa ah, iyo kuwo uu la yeelanayo Raysalwasaare Rooble, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo beesha caalamka,” ayaa lagu yiri bayaanka golaha.
Sidoo kale golaha ayaa qoraalkaan ku sheegay in xasiloonida dalka ay gud dheer ku sii dhaceyso, markii la eego boobka baahsan ee doorashada lagu hayo, isla markaana aysan aqbali doonin taas.
“Goluhu wuxuu mar kale caddaynayaa in uusan aqbali doonin doorashooyinka degaannada qaar ee lagu billaabay boob qaawan oo la isugu awood sheegtay, laguna tuntay dhammaan habraacyadii doorashada, taasoo halis gelinaysa xasiloonida dalka iyo jiritaanka dawladnimada,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka midowga musharaxiinta.
Ugu dambeyntii bayaanka golaha waxaa lagu yiri, “Goluhu wuxuu sii wadayaa kulamadiisa, wuxuuna ka shaqaynayaa sida ugu haboon oo dalka looga hirgelin lahaa doorasho hufan oo daahfurnaan leh, laguna badbaadiyo masiirka dalka iyo geedi-socodka dhismaha nabada iyo dawladnimada.”
Muqdisho 28ka Nofeembar 2020 Waxgaradka Mareexaan oo ka soo hor jeeda boob ay sheegeen in lagu sameeyey kursigoodii golaha shacabka ee HOP#054 ayaa shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb, waxayna sheegeen in la boobay kursigooda, iyagoo ku goodiyey in aysan aqbali doonin, wixii maanta ka dhacay Dhuusamareeb.
Kursigaas oo afartii sano ee lasoo dhaafay uu ku dhafiyey Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ayaa maanta doorashadiisa lagu qabtay Dhuusamareeb, waxaana la shaaciyey in mar kale uu ku soo baxay Cabdishakuur Cali Mire oo ah nin siyaasad ahaan aad ugu dhaw madaxweyne Farmaajo.
Waxgaradkii maanta saxaafadda kula hadlay Dhuusamareeb waxay sheegeen in Cabdishakuur ay doorteen dad aan ka dhalan beesha iyo askar, sida ay hadalka u dhigeen, waxayna cadeeyeen in aayaha kursigaas ay u tasha doonaan.
“Musharaxiinta Mareexaan ee u tartameysa seddax kursi ee soo hartay, qofkii aan dooneyn inuu wax boobo ha aado Caabudwaaq iyo Balambal, halkaas ayaan aayaheena uga tahsaneynaa, Galmudugtii aan garbaha ka taagneyn ayaa na boobeysa, cid sanka naga toli karta ma jirto,” ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka Mareexaan.
Waxa uu shaaca ka qaaday in shir weyn ay beesha Mareexaan ku qabsan doonto magaalada Caabudwaaq maalmaha soo socda, “Galmudug sidaan ugama sii mid ahaan karno, musharaxiinta beesheena ha tageen Caabudwaaq, halkaas ayaan ku dooraneynaa kuraasteena.” ayuu yiri.
Waa beeshii labaad oo ku goodineysa inay isaga baxeyso maamul goboleedka Galmudug, kadib markii la boobay kuraastooda, Mareexaan iyo Wacaysle, waxay sheegeen in kuraastoodii loo boobay Yaasiin Farey iyo Cabdishakuur Cali Mare oo ah laba nin oo Farmaajo aad ugu kalsoon yahay, iyagoo ka dhiidhinaya boobkaas ayey hoggaanka beelahaas shaaciyeen inay isaga bixi doonaan Galmudug oo aayahooda ay ka tashan doonaan.
Muqdisho 28ka Nofeembar 2020 Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maanta shaaciyey in la hakiyey ku dhowaaqista natiijada rasmiga ah ee kursiga tirsigiisa uu yahay HOP#067, kaas oo uu Khamiistii ku soo baxay agaasimaha KMG ah ee hay’adda nabad-sugida Yaasiin Farey, kadib doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug.
Warqad ka soo baxday guddiga xallinta khilaafaadka, isla-markaana lagu socod siiyey guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxaa lagu sheegay in guddigu ay soo gaartay dacwad ka dhan ah kursigaasi, taas oo ay soo gudbiyeen musharrax lagu magacaabo Axmed Cabdikariin Cali iyo sidoo kale Nabadoon Cali Xasan Cali (Cali Jeesto).
“Guddiga xallinta khilaafaaadka doorashada dadban (GXKHDD) ee 2020/2021, asagoo fulinaya Habraaca lagu dhisay GXKHDD ee soo baxay I-dii Oktoober 2020, wuxuu ku wargalinayaa guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Federal (GHDHF) in dacwad laga keenay kursi Lumber HOP#067,” ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday guddiga xallinta.
Sidoo kale guddiga ayaa hoosta ka xariiqay in go’aan rasmi ah uu ka gaarayo dacwadda, wuxuuna soo jeediyey in maanta laga bilaabo la hakiyo ku dhowaaqista natiijada.
“Haddaba guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban (GXKHDD) ee 2020/2021, asagoo gudanaayo waajibaadka shaqo ee loo igmaday wuxuu ku wargelinayaaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal (GHDHF) in la hakiyo ku dhowaaqista natiijada rasmiga ah ee kursi lambar HOP#067 laga bilaabo 28/11/2021 inta GXKHDD uu go’aan ka gaarayo dacwadda laga soo gudbiyey kursigaas,” ayaa markale lagu yiri warqadda guddiga.
Guddiga xallinta khilaafaadka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in qaadista dacwadda ay socon doonto muddo todobo cisho oo maanta ka bilaabeyso, iyada oo la faray dhinacyada dacwadda gudbiyey in 24 saac gudahood ay ku soo dhammeystiraan eedeymahooda.
Muqdisho 28ka Nofeembar 2020 Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kulan gaar ah la qaatay guddiyada doorashooyinka dalka ayaa soo saaray digniin la xiriirta doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Si kastaba, xubnaha mucaaradka oo dhankooda isha ku haya qaabka ay hadda ku socota doorashada ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan tallaabooyin kale, ayna soo dhisi doonaan dowlad cusub, haddii aan wax laga beddalin qaabka ay haataan wax ku socdaanhttps://www.youtube.com/watch?v=7tLi0V0QbxA
WARARKA MAANTA 25ka Nofeembar 2020
Su’aallaha Maanta: Yaaa diiday in cadaaladda la hor keeeno dadkii dilay Kornayl Ikraam Tahaliil Ma Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” mise Rayal Wasaare “Dhooqo-Raam-Sade/Dhiiqo-Raam-Sade”? Yaa Madaxweyne ka noqon doona Madaxweyne Soomaaliya 2021? Maxay shacabka Soomaaliyeed ku nacday siyaasadda fashilan ee Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo 99,5% “Been+Hawaas”? Maxuuse Madaxweyne Farmaajo Iyo Raysal Wasaare Kheyre ugu tilmaameen ururka #ONLF inay argagixiso yihiin? Yaa argagixiso ah? Meeqo argagixiso ah ayaa saraakiil sar-sare ka Hay’adda Nabad-Sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka? Maxuuse saxaafadda ugu dhuumanayaa Taliayaha Hay’adda Nabad-Sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka Argagixiye Maal-Galiye Fahad Yaasiin “Daba-Naasle”? Maxuu u fashilmay qorshihii Gedo ee uu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo “Been-Hawaas” ka rabay Gedo iyo burburinta Dowlad Gobaleedka Jubbaland? Yaa diidan xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo maqaamka #Muqdisho Ma Madaxweyne Farmaajo mise Raysal Wasaare Kheyre? Yaa Madaxweyne ka noqon doona #Soomaaliya 2021da? Yaa dhaca canshuurta gobalka Banaadir? Yaa noqon doona Taliyaasha cusub ee Booliska, Nabad-Sugidda Iyo Militariga kadib fashilan baahsan oo ku yimid laamaha amniga dalka? Meeqo shisheeye ah ayaa ku nool dalka Soomaaliya? Meeqo Hay’adood oo si sharci-darrp ah ayaa ka dhex shaqeeya Soomaaliya? Ha wiqleyso!
Muqdisho 25ka Nofeembar 2020 Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qoraal ka soo saaray doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa ugu horeyn bogadiyey guddiyada doorashooyinka heer federal iyo kuwa Somaliland, Galmudug iyo Koofur Galbeed oo si rasmi ah u bilaabay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad, isagoo fariin u diray guddiyada dowlad goboleedyada kale.
“Ra’iisul Wasaaraha waxa uu farayaa Guddiyada maamulka doorashooyinka ee Puntland, Jubaland iyo Hirshabelle in ay si dhaqso ah u bilaabaan qabashada doorashooyinka Golaha Shacabka si doorashada loogu soo gabagabeeyo waqtiga loo cayimay ka hor dhammaadka 2021 ka,” ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska Rooble.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku amray guddiyada doorashooyinka, “Inay ilaaliyaan madax-banaanidooda una hoggaansamaan xeerarka iyo Habraacyada doorashooyinka ee ku cad heshiisyadii 17 September iyo kowdii Oktobar 2020, 27-kii May iyo 24 August 2021.”
Rooble ayaa qoraalkaan ku sheegay in hufnaanta doorashada ay muhiim u tahay in doorashada u dhacdo si nabad-gelyo ah iyo in xilligaan kala guurka ah uu noqdo mid looga gudbo si xasilooni ku jirto.
“Shacabka Soomaaliyeed waxa ay isha ku hayaan hufnaanta doorashada oo saldhig u ah xasilloonida dalka, sidaas darteed Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu ku adkeynayaa guddiyada doorashooyinka in ay arrintan iska saaraan mas’uuliyad iyo taxadar dheeri ah,” ayaa qoraal lagu yiri.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka codsaday madaxda dowlad goboleedyada inay guddiyada doorashooyinka u fududeeyaan gudashada waajibaadkooda, kuna dhiirigeliyaan guddiyada in ay si madax-bannaan oo hufan u fuliyaan howlaha doorashada
Turki Iyo Imaaraadka 25ka Nofeembar 2020 Turkey iyo Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya balaayiin doolar, oo ay qeyb ka yihiin taknoolajiyadda iyo tamarta kadib sanado ay xiisad siyaasadeed ka dhaxeysay labada dal.
Heshiiska ayaa lagu saxiixay magaalada Ankara kadib wada-hadallo ay yeesheen madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan iyo dhaxal-sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan.
Booqashada Sheikh Mohammed ee Ankara, oo aheyd tii ugu horreysay muddo toban sano ah, ayaa timid ayada oo labada dal ay ka shaqeynayaan inay hagaajiyaan xiriirkooda, xilli ay jirto xasarad lacag oo ka taagan Turkey, ayada oo qiimaha lacagta Lira ay hoos u dhacday.
Sheikh Mohammed ayaa sheegay inuu wada-hadallo miro-dhal ah, oo ku aadan xoojinta xiriirka labada dal, la yeeshay Erdogan
Muqdisho 25ka Nofeembar 2020 Gudiga Doorashooyinka Heer Federaal ayaa markii u horeysay ka hadlay hadal haynta qodob ka mid ah habraaca doorashada Golaha Shacabka oo Yaasiin Farey u diidaya inuu is-sharxo, haddii aanu buuxin shuruudda laga doonayo.
Afhayeenka Gudiga Doorashooyinka Heer Federaal Axmed Safiina oo arrintaas ka hadlay ayaa yiri in eedeynta qoddobkaas ay ku saxan yihiin, hase yeeshe habraacu uusan cidna ka reebeynin doorashada, sida uu hadalka u dhigay.
“Doorashadan waa doorasho dadban, waxaana u aasaas ah heshiis iyo is afgarad siyaasadeed. Madashii Wada-tashiga Qaranka shirkii ugu dambeeyay ee ay magaalada Muqdisho ku yeesheen waxaa laga soo saaray habraaca lagu dhaqayo doorashada, habraacaasi ma sheegayo oo ma xadidayo muwaadinka Soomaaliyeed ee xilal haya, xil dowladeed ama xil ciidan, inuu iska soo casilo kursiga uu hayo,” ayuu yiri.
“Doorashadii Aqalka Sare waxaa ka qayb-galay safiirro, qaarkoodna ay ku guuleysteen ama ku guul-darreysteen, imikana waxaa u sharraxan saraakiil ciidan iyo safiirro, habraacaasina ma dhigayo inay isa-soo casilaan 7 maalmood ka hor.”
Muqdisho 25ka Nofeembar 2020 Guddiga doorashooyinka heer federaal oo war-saxaafadeed ka soo saaray doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayaa xaqiijiyey inay jiraan cabashooyin ka soo gaaray qaar ka mid ah 10 kursi ee illaa hadda la doortay, waxuuna guddigu balan qaaday in baaritaan dhab ah ay ku sameyn doonaan cabashooyinka laga keenay doorashada kuraastaas.
Muqdisho 25ka Nofeembar 2020 Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goor dhow ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa ka dhashay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, wuxuuna ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim oo ku taalla degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya in gaariga qarxay la dhigay afaafka hore ee Dugsiga Sare Banaadir oo ku yaalla halkaasi, iyada oo qaar ka mid ah ardayda iskuulka ay waxyeelo soo gaartay
Sidoo kale dad shacab ah oo wadada marayay ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaas, waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana socda gurmad loo fidinayo dadka ay waxyeelada soo gaartay oo u badan shacab marayay wadada uu qaraxu ka dhacay
Muqdisho 25ka Nofeembar 2020 Guddoomiyihii hore ee baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sanado badan kadib wajahaya inuu waayo kursigiisa xildhibaannimo oo isbaaro siyaasadeed loo dhigtay.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, go’aankan ayaa ka yimid madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ku amray inaan lasoo saarin Jawaari.
Jawaari oo hadda ku sugan Baydhaba ayaa la kulmay cadaadis xooggan, waxaana lagu qasbayaa inuu kursigan isaga haro, inkasta oo isna isku dayayo in la diiwaan-geliyo mana cadda sida ay xaaladda ku dambeyn doonto.
WARARKA MAANTA 15ka Nofeembar 2021 Sir!
Su’aallaha Maanta Yaa qarxiya #Muqdisho? Yaa #Soomaaliya ka dhigay dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan “Farmaajo Been-Hawaas”? Yaa diiday in maxkammad la keeno argagixiso maal-geliye Argagixiye Fahad Yaasiin oo amaray dilka Marxuumad Kornayl Ikraam Tahaliil? Yaa noqon doona Madaxweynaha cusub ee #Soomaaliya Danjire Daahir Geele mise Madaxweyne Mudane Xassan Shiikh Maxamuud? Ha wiqleyso!
Libya 15ka Nofeembar 2021 Sayful Islam Qadafi, oo ah wiilka madaxweynihii hore ee Libya Mucamar Qadafi, ayaa isku sharxay xilka madaxweynaha Libya ee doorashada dhaceysa bisha December.
Muqdisho 15ka Nofeembar 2021 Xuseen Sheekh Cali, oo horey u ahaa la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, haddana madax ka ah machadka daraasaadka amniga ee Hiraal, ayaa sheegay inuu maqlayo war murugo leh oo kasoo kordhay kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Jubbaland 15ka Nofeembar 2021 Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa goor dhow kasoo kicitimay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, isaga oo ku sii jeedo dhinaca magaalada Garoowe.
Muqdisho 15ka Nofeembar 2021 Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa 1-dii May ee sanadkan sii dhammaanaya 2021 lagu wareejiyey maamulka Doorashada, kadib qalalaasihii ka dhashay muddo kororsiga Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Ra’iisal wasaaraha ku mashquulsan magacabista wasiiro ilaa agaasimeyaal waa xilgaarsiin aan sharcigu siineynin inuu isbedel weyn ku sameeyo xilalka dowladda, laakiin dowladda Farmaajo ee sanadka sii joogta xilka ayaa sharci-darradaasi caadi ka dhigtay iyadoo uu Rooble ka faa’iideysanayo
Ahlu Sunna 15ka Nofeembar 2021 Madaxa siyaasadda ee Ahlu Sunna oo wareysi siiyey BBC ayaa ka hadlay eedeyntii uu General Aadan Abshir Nuure (Laba Afle) u jeediyey hoggaanka sare ee Ahlu Sunna, kadib markii ay fashilmeen wada-hadalladii soo socday.
Muqdisho 15ka Nofeembar 2021 Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug.Rooble ayaa safarkiisa waxa uu la xiriiraa hubinta howlaha qabsoomidda doorashada Golaha Shacabka, gaar ahaan xubnaha ka imaanaya dowlad goboleedka Galmudug.
Qaban qaabadii ugu dambeysay ee soo dhoweynta wafdiga ra’iisul wasaaraha ayaa haatan laga dareemayaa caasimada Dhuusamareeb, iyada oo aad lo adkeeyey amniga degmadaas.
Wararka ayaa sheegaya in ra’iisul wasaaraha marka uu tago kulamo gaar gaar ah la qaadan doono hoggaanka sare ee Galmudug, isaga oo kala hadli doono doorashooyinka dalka.
Sidoo kale waxaa la filayaa in kulankan lagu soo qaado xiisadda u dhexeysa Ahlu Sunna iyo Galmudug oo weli ka taagan duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Safarka Rooble ee Dhuusamareeb ayaa bilow u ah socdaallo kala duwan oo uu kiu bixin doono xarumaha maamul goboleedyada, isaga oo u kuur-galayo doorashooyinka 2021-ka.
Muqdisho 15ka Nofeembar 2021 Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini’aadantinimada UNOCHA ayaa warbixin cusub ka soo saartay xaaladda adag ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha bani’aadanimada ee haatan ka taagan gudaha wadanka.
WARARKA MAANTA 14ka Nofeembar 2021 Sir!
Su’aallaha Maanta Yaa qarxiya #Muqdisho? Yaa #Soomaaliya ka dhigay dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan “Farmaajo Been-Hawaas”? Yaa diiday in maxkammad la keeno argagixiso maal-geliye Argagixiye Fahad Yaasiin oo amaray dilka Marxuumad Kornayl Ikraam Tahaliil? Maxayse Warbaahinta dalka #Kenya u aflagaadaynayaa Ummadda Soomaaliyeed kadib markii looga guullaystay kiiska badda ee ICJ? Ha wiqleyso!
Jubbaland 14ka Nofeembar 2021 Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan ayaa ku eedeeyay ciiddamada dowladda federalka ee ku sugan gobolka Gedo in ay kasoo horjeedaan in maamulka Jubbaland gurmad u fidiyo shacabka abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gobolkas
Madaxweyne ku xigeenka oo wareysi siiyay BBC-da laanta af soomaaliga ayaa sheegay hay’addaha samafalka ee Jubbaland in aanay awood u lahayn in ay dhaqdhaqaayo ka sameyn karaan Gedo, isagoo sheegay in dowladda federalku siyaasadaysay gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen.
“Gedo, waxaa ka jira ciiddan si sharci darro ah ugu afduuban, in wax laga qabtana dhib ayay keenaysaa, sababtoo ah cid kaste oo wax qaban lahayd, wajiyo kale ayay u sameeyeen,” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Wuxuu codsaday in la kala saaro aragtida lagu kala duwan yahay iyo bini’aadanimada, isla markaana wuxuu sheegay in haatan la joogo waqtigii loo gurman lahaa dadka ku dhibaataysan gobolka Gedo.
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ku dhufatay abaaro aad u daran, kuwaas oo sameeyay dadka reer miyiga ah, waxaana dhawaan baaq degdeg ah kasoo saaray raysal wasaaraha Soomaaliya.
Raysal wasaaraha ayaa beesha caalamka ka codsaday in loo gurmado dadka abaaruhu ku saameeyeen Jubbaland.
Muqdisho 14ka Nofeembar 2021 War-saxaaafaddeed kasoo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in saraakiisha ugu sarraysa howlgalka ay aad uga xumaadeen dilkii loo geystay dadka rayidka ah, waxayna mar kale tacsi u direen qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkaas shacabka ahaa.
“Howlgal ahaan, AMISOM waxaa si qoto dheer uga go’an nabadda, amniga iyo xasilloonida Soomaaliya iyo ilaalinta dadka deegaanka iyadoo si adag loo ixtiraamayo Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada (IHL), Sharciga Xuquuqul Insaanka Caalamiga ah, iyo Xeerarka Hawlgalka ee AMISOM. Dhammaan arrimahan waa qayb ka waajibaadkayaga,” ayuu yidhi danjire Madeira madaxa midowga afrika ee Soomaaliya.
Taliyaha Qeybta 1-aad ee Ciidanka Difaaca Uganda, Brig. Gen. Don Nabasa, ayaa isna sheegay hadafkoodu inuu yahay sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen qatarta Alshabaab iyo Daacish, balse aysan marnaba meesha ku jirin in howlgalka AMISOM lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee u baahan in ilaaliyo naftooda.
AMISOM waxay sheegtay in saddexda askari ee lagu xukumay 39 ka sano ee xabsiga ah in dalkooda lagu celindoono si ay halkaas ugu dhameystaan xukunka ay dowladda Soomaaliya ku riday.
Muqdisho 14ka Nofeembar 2021 Qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho waxaa caawa ka socda howlgallo ay sameynayaan ciidamada ammaanka, sidoo kale saraakiil ciidan iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tegay goobo dhowr ah, halka howlgal ka dhacay degmada Deyniile ay ciidamada NISA ku soo qabteen waxyaabaha qarxa.
Ugu horeyn howlgal ciidanka NISA, gaar ahaan kuwa Duufaan ay caawa ka fuliyeen xaafadda Oodweyne ee degmada Deyniile ayaa lagu soo saaray miinooyin la sheegay in Al-Shabaab ay ku aaseen qeybo ka mid ah xaafadaas, waxaana lasoo bandhigay sawirrada miinooyinkaas.
Sidoo kale degmooyin ay ka mid yihiin Hodan, Howlwadaag iyo Waaberi ayey caawa ka socdaan howlgalladaas oo lagu baacsanayo burcadda habeenkii dhaca ka geysata degmooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho, sida ay noo sheegeen saraakiil qeyb ka ah howlgallada.
Dhanka kala guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa caawa kormeer ku tegay wadada isku xirta Saldhiga Bari ee degmada Cabdicasiis ilaa Isgooska Mirinaayada, halkaas oo maamulka gobolka Banaadir uu dhawaan ka hirgaliyey leyrarka Cad-Ceeda ku shaqeeya, kuwaas oo Guddoomiye Cumar uu sheegay inay kor u qaadeen bilicda wadadaasi, isla markaana uu leyrku muhiim u yahay sugidda ammaanka.
Muqdisho 14ka Nofeembar 2021 Kooxda Argagixisa Al-Shabaab ayaa mar kale war kasoo saartay qaraxii Khamiistii ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Muqdisho 14ka Nofeembar 2021 Wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo war ka soo saaray xukunka dilka iyo xabsiga isugu jira ee lagu riday askarta AMISOM ee dishay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayey deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, ayaa su’aal ka keenay cadaaladda la marsiiyey AMISOM ee la marsiin waayey saraakiisha NISA ee lagu tuhmaayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Fiqi oo qoraalkaan soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa ugu horeyn guul weyn ku tilmaamay in askar iyo saraakiil ka tirsan AMISOM lagu maxkamadeeyo magaalada Muqdisho, isla markaana ay cadaalad helaan ehellada dadkoodii la laayey.
“Golweyn – Shabeelada Hoose eheladii dadkooda ay AMISOM laysay cadaalad ay ku qanacsan yihiin ayay heleen oo askar iyo saraakiil AMISOM ayaa Muqdisho lagu maxkamadeeyo waa guul weyn iyo xuquuq la helay,” ayuu yiri Axmed Fiqi.
Sidoo kale Fiqi waxuu su’aal ka keenay hadii la maxkamadeeyey AMISOM, sababta loo maxkamadeyn waayay ragga lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin kiiska Ikraan Tahliil oo nolol iyo geeri lagu waayey.
“Haddaba Haddii AMISOM la maxkamadeeyey, sidee loo maxkamadeyn waayay kuwii Ikraam Tahliil kiiskeeda ku eedeysnaa oo ka tirsan hey’adaha amniga Soomaaliya mid ka mid ah? Cadaaladda AMISOM ay yeeshay ee la karsiin waayey NISA oo hey’ad dawladeed sidee umadda loogu fasiri karaa!?” ayuu yiri Fiqi.
Jimcihii shalay waxaa dil toogasho ah lagu xukumay laba ka mid ah saraakiisha AMISOM, gaar ahaan kuwa Uganda, sidoo kale seddax askari ayaa lagu xukumay xabsi 40 sano ah, kuwaas oo lagu maxkamdeeyey xarunta Xalane ee Muqdisho, isla markaana lagu helay inay todoba qof oo shacab ah si bareer ah ugu laayeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose.
Galmudug 14ka Nofeembar 2021 Ciidamada badda ee Galmudug ee ka howl-galka degmada Hobyo ayaa gacanta ku soo dhigay markab kalluumeysi oo si sharci darro uga jalaabanayey xeebaha maamulkaasi, gaar ahaan dhinaca xeebta Hobyo ee gobolka Mudug.
Paris 14ka Nofeembar 2021 Dacwad oogayaasha Faransiiska ayaa baaritaan ku billaabay kufsi la tuhunsan yahay in gabar askari ah loogu gaystay gudaha xarunta madaxtooyada Faranasiiska ee Paris bishii July, kaasi oo lagu eedeeyey askari kale, waxaa sidaas AFP u sheegay il-wareedyo garsooor.
Kufsiga la tuhunsan yahay ayaa dhacay bishii July xilli ay socotay xaflad loo sameynayey Jeneral iyo laba qof oo kale, oo uu ka qeyb galay madaxweyne Emmanuel Macron, sida uu shaaciyey wargeyska maalinlaha ah ee Faransiiska ee Libération, oo ahaa kan ugu horreeyey ee xogtan shaaciya.
Askariga la eedeeyey ayaa waxaa su’aalo weydiiyey dacwad-oogayaasha 12-kii July, waxaana u harsan su’aalo kale, hase yeeshee weli si rasmi ah dacwad looguma soo oogin, sida uu sheegay ilo-wareedka garsoor.
Xafiiska madaxweyne Macron ayaa ahmiyad ka dhigtay inuu iska ilaaliyo fadeexad kale oo qabsata tan iyo shaac ka qaadistii ceebta laheyd ee ku saabsaneyd in mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah uu weeraray qof da’yar oo dibad-bax dhigayey, bishii May ee 2018-kii.
Askarigaas oo lagu magacaabo Alexandre Benalla ayaa toddobaadkii tegay lagu xukumay saddex sano ee xabsi ah, balse ma geli doono xabsi marka la eego xeerka xukunada Faransiiska, wuxuuse xiran doonaa aalad lugta lagu xirto oo la socota dhaq-dhaqaaqiisa.
Sida uu sheegay wargeyska Libération, gabadha sheegtay in la kufsaday iyo askariga ay eedeysay ayaa saaxiib ahaa, waxayna ka wada shaqeynayeen xafiis amnigiisa aad loo sugo oo ka tirsan madaxtooyada Élysée Palace, oo shaqadiisu tahay arrimaha xasaasiga ah ee dowladda gaar ahaan, sirta culus.
WARARKA MAANTA 6da Nofeembar 2021 Sir!
Su’aallaha Maanta Yaa doorasha xalaal ah #Soomaaliya ka qaban kara ma dhurwaa/waraabe hilib dagan arka mise libaax goosha waxay ugaarato ka xooggaya? Yaa #Soomaaliya Madaxweyne ka noqon doona Danjire Daahir Geele ama Mudane Xassan Shiikh Maxamuud? Yaa #Soomaaliya ka dhigay dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan “Farmaajo Been-Hawaas”? Yaa diiday in maxkammad la keeno argagixiso maal-geliye Argagixiye Fahad Yaasiin oo amaray dilka Marxuumad Kornayl Ikraam Tahaliil? Maxayse Warbaahinta dalka #Kenya u aflagaadaynayaa Ummadda Soomaaliyeed kadib markii looga guullaystay kiiska badda ee ICJ? Ha wiqleyso!
Muqdisho 6da Nofeembar 2021 Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay diblomaasi u dhashay dalka Uganda, Simon Mulongo, oo ah ku xigeenkii safirka midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo muddo toddobaad ah loo qabatay inuu uga baxo dalka
Mr Mulongo oo xalay isagoo ku sugan Muqdisho khadka telefoonka kula hadlay wargeyska monitor ee kasoo baxa Uganda, ayuu u sheegay in ay wax lala yaabo ku noqotay go’aanka ay ka qaadatay Soomaaliya, isagoo sheegay in uusan ogayn wax khalad ah uu sameeyay.
Muqdisho 6da Nofeembar 2021 Waxaa la soo bandhigay wareysi ay Dalsan TV horay u siisay Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo sheegeysa in qof beesheeda ka dhashay oo kursiga kula tartamaya uusan jiri doonin sanadkaan, iyadoo balan qaaday xilligaas hadii la helo qof aqoonyahana oo metelaada beesha kala wareega ay siyaasadda ka nasa doonto.
Hase yeeshee kursiga xildhibaan ee Khadiijo Diiriye ay ku fadhisay 20-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa hadda u sharaxan gabar aqoonyahanad ah oo lagu magacaabo Baarliin Biin, waxaana haatan Khadiijo Diiriye soo wajahay qalqal xoog leh.
“Wiil ama Gabar qofkii isku soo sharaxa kursiga xildhibaan ee aan ku fadhiyo anigaa ku wareejinaa, waan daalay caafimaad ahaan, waan jeclahay inaan siyaasadda ka nasto oo cariishka Hooyadey iyo Aabehey ay Jowhar ku leeyihiin aan ku nasto, laakiin rajada Alle lagama quusto oo laxaw jeclaa dalkaan iga heysa,” ayey tiri Kadiija Diiriye oo bilo ka hor wareysigaan bixisay.
Mar la weydiiyey in beesheeda Yaxar laga heli karo qof aqoonyahana oo kursiga ay ku fadhiso ku meteli kara iyo inay iyadu fursadaha u diido dadkeeda ayey ku jawaabtay, “Mar kasta beesheydu waxay itiraahdaa nama aadan ceebeyn, xattaa beelaha kale ayaa I amaana, beesheyda waa ku jiraan wiilal iyo gabdho waxbartay, laakiin anigay I dhaheen nametel.”
Sidoo kale Khadiija Diiriye waxay wareysigaas ku sheegtay inay ku faraxsan tahay hanaanka awood qeybsiga dowladnimada Soomaaliya ee 4.5-ka, oo beesheeda u aqoonsan ‘nus’ ama beel barkeed.
Muqdisho 6da Nofeembar 2021 Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax khasaare geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kaas oo geystay khasaare kala duwan.
Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, gaar ahaan dhanka deegaanka Garasbaaley.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan labo qof oo shacab ahaa, halka uu ku dhaawacmay mid kale, kadib markii ay miinadu qabsatay mooto ay saarnaayeen.
Dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa ka soo jeeda degmada Afgooye, waxaana ku jiray Macalin aad looga yaqiinay halkaasi.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda oo waxyar ka hor maray halkaasi, siday ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo deegaanka ah.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, iyaga oo howl-gallo kooban ka sameeyey wadada uu qaraxu ka dhacay.
Uganada 6da Nofeembar 2021 Maxkamad ku taalla dalka Uganda ayaa saddex qof kusoo oogtay dacwad argagixisanimo oo la xiriirta qaraxii la fashiliyey ee lala beegsan lahaa tacsida Jeneraal dagaal xooggan kooxda Al-Shabaab kula galay Soomaaliya.
Jeneraal Paul Lokech oo loo yaqaan “Libaaxa Muqdisho” ayaa laba jeer soo noqday taliyaha ciidamada Amisom, wuxuuna hoggaamiyey howlgalkii Al-Shabaab looga saaray Muqdisho 2011-kii, taasi oo uu ku muteystay naaneysta “Libaaxa Muqdisho. Wuxuu bishii August ku geeriyooday dalkiisa.
Dacwad-oogayaasha Uganda ayaa sheegay in saddexda qof ee dacwadaha lagu soogay ay yihiin rag xubno ka ah kooxda mucaaradka ee ADF, oo Kampala ay sheegtay inay mas’uul ka ahaayeen qorsheynta weerarka lagu qaadi lahaa tacsida “Libaaxa Muqdisho,” bishii August.
Kooxda ADF, oo asal ahaan aheyd mucaarad Uganda ah, ayaa lagu eedeeyey inay kumanaan qof oo shacab ku dishay bariga dalka Jamhuuriyadda Dimqoraadiga ah ee Congo, sanadihii dhowaa.
Bishii March, dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah kooxda ADF ula xiriirisay kooxda Daacish.
Geoffrey Turyamusiima, oo ah qareenka saddexda nin ee la eedeeyey, ayaa weriyayaasha u sheegay in kalyantigiisa lagu jir dilay xabsiga kadib markii la xiray bishii August.
Maraykanka 6da Nofeembar 2021Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa mar kale dib usoo saartay abaal-marin 19 milyan oo dollar ah oo ay ku yaboohday akhbaaraad la xiriira halka ay ku sugan yihiin afar ka mid ah madaxda Al-Shabaab.
Qoraal afartii bishan lasoo dhigay twitter-ka Rewards for Justice (Abaal-gudka cadaaladda) oo ah barnaamij ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda ayaa lagu sheegay in afarta hoggaamiye ay kala yihiin; Abu Cubeydah, Mahad Karate, Fu’aad Maxamed Khalad iyo Jacfar.
Abu Cubeydad oo magaciisa saxda uu yahay Axmed Diiriye ayaa hoggaaminayey Al-Shabaab tan iyo markii duqeyn diyaaradeed lagu dilay hoggaamiyihii uu xilka kala wareegay ee Axmed Cabdi Aw-Maxamed oo la yaqiin Axmed Godane, bishii September 2014. Mareykanka ayaa madaxa Abu Cubeydah dul dhigay 6 milyan oo dollar.
Mahad Karate oo magaciisa saxda uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Warsame ayaa ah ku-xigeenka hoggaamiyaha Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale mas’uul ka yahay qeybta amniyaatka ama sirdoonka kooxda Al-Shabaab. Mareykanka ayaa Mahad Karate ku raadinaya 5 milyan oo dollar.
Fu’aad Maxamed Khalaf waxaa la rumeysan yahay inuu yahay fududeeyaha dhanka maaliyadda ee kooxda. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay inuu u wareegay dhanka dacwadda ee kooxda. Waxay Mareykanka ku yabooheen 5 milyan oo dollar ciddii usoo gudbeysa aakhbaaraad la xiriira Fu’aad.
Jafar o sidoo kale loo yaqaan Amar, wax xog badan ah lagam hayo hase yeeshee waxaa la rumeysan yahay inuu yahay madaxa howlgallada ee kooxda Al-Shabaab, waxaana Mareykanka ay madaxiisa dul dhigeen 3 milyan oo dollar.
Mareykanka ayaa sababta uu u doonayo madaxdan ku sheegay qaraxyo ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya iyo inay “weli wadaan dhaq-dhaqaaqyo halis ku ah ammaanka, nabad-galyada iyo xasilloonida” gobolka.
Muqdisho 6da Nofeembar 2021 Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah musharixiinta sanadkaan u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya ayaa duray tallaabadii ay dowladda Soomaaliya dalka uga ceyrisay ku-xigeenka ergayga Midowga Afrika Simon Mulongo.